परमप्रभुबाटको विजय - Nepali Christians Site
Posted by Resham Kumar sunuwar on August 3, 2013 at 9:43am
आज मानिसको जीवनमा विभन्न कुराहरुबाट दिन दिनै युद्ध अनि संर्घष गरीरहनुपरेको छ। कुनै न कुनै कुराहरुसँग युद्ध अनि संर्घष गरीरहनु परेकै छ। कतिचोटी मानिसले आफ्नो कोशिस अनि तगात लगाएर यी युद्धहरु अनि संघर्षहरु जित्‌ने प्रयत्‍न गररिएका हुन्छन यद्यपि यसबाट मानिसले विजय प्राप्त गर्न नसकेर हार खाईरहेको अवस्थाहरु छन्। बनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खान्छ भने जस्तै कतिजनाको मनमा युद्ध अनि संर्घष चलीरहेको हुन सक्दछ। कति जना शारारिक समस्यासँग लडीरहेका छन् भने कतिजना रोगहरुसँग लडीरहेका छन्। कतिजना आर्थिक समस्याहरुसँग लडीरहेका छन् भने कतिजना जीवनमा दैनिक आईपर्ने विभिन्न कुराहरु अनि घटना र समस्याहरुसँग लडीरहेका छन्। मानिसहरु आफ्नो हरेक शक्ति, ज्ञान, बुद्धि लगाएर लडीरहेको अवस्था भए तापनि विजय पाउन नसकेको अवस्थाहरु होलान्। के जीवनमा हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौं त?
“युद्धको दिनको लागि घोडाहरु तयार पारिन्छ तर विजयचाहिं परमप्रभुको हातमा हुन्छ।” हितोपदेश २१:३१।
युद्धको दिनको लागि घोडाहरु तयार पारिन्छ विजयचाहिं परमप्रभुको हातमा हुन्छ
यहाँ हितोपदेश २१:३१ मा सोलोमान भन्छन् कि युद्धको दिनको लागि घोडाहरु तयार पारिन्छ तर विजयचाहिं परमप्रभुको हातमा हुन्छ। निश्चय पनि यो कुरा साँचो हो कि हरेक कुरामा विजयचाहिं परमेश्वरबाट आउँदछ। कति चोटी हामी सोंच्छौ हाम्रो जीवनमा हामी आफै नै गर्न सक्छौं। अनि हामीले परमेश्वरलाई बिर्सिदिएका हुन्छौं। जब समस्या अनि असफलताहरु आई लाग्छन् अनि मात्र परमेश्वरको सहयताको खोजी गर्दछौं। तर आज हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो कि विजयचाहिं परमेश्वरको हातमा छ र उहाँले हामीहरुलाई विजय दिनुहुन्छ।
“परमेश्वरविना म विजय बन्न सक्दिन, परमेश्वरसँगै म हुँदा म असफल हुन सक्दिन।”-अब्रहाम लिङ्कन
युद्धको दिनको लागि घोडाहरु तयार पारिन्छ युद्ध भन्ने वित्तिकै हामीले मानिस मानिसबीचको युद्धको कुरालाई सम्झिनु हुँदैन। यो युद्धको कुरा उदाहरणको कुरा हुन सक्छ हाम्रो लागि। कस्तो हो त हाम्रो युद्ध? हाम्रो युद्द भनेको आत्मिक युद्ध हो। “किनकि हामीहरुको युद्ध शरीर रगतको विरुद्ध होईन, तर प्रधनताहरुका विरुद्ध, शक्तिहरुका विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका संसारिक शासकहरुका विरुद्ध, र स्वर्गीय स्थानहरुमा भएका दुष्टयाँइका आत्मिक सेनाहरुका विरुद्ध हो।”एफिसी ६:१२। यहाँ हाम्रो युद्ध भनेको शरीर र रगत भएको मानिसहरुसँग होईन भनेर पावल स्पष्ट पार्दछन्। हाम्रो युद्ध कोसँग हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ। हामीले मानिसहरुलाई शत्रुकोरुपमा देख्‍नु भूल हो। हाम्रो युद्ध शैतान अनि दुष्ट आत्माको विरुद्धमा हो। शैतान दुष्ट आत्मा भएकोले उसको आफ्नो भौतिक शरीर हुँदैन। उसले भौतिक शरीर भएकाहरुलाई प्रयोग गर्न चाहन्छ। शैतानलाई हामीले हाम्रो वाहिर आँखाले देख्न सक्दैनौं। त्यसैकारण शैतानसँगको युद्धको लागि आफुलाई तयारी गर्नु राम्रो कुरा हो।
यहाँ युद्धको लागि घोडाहरु तयार पारिन्छ भनेर भनिएको छ। यहाँ बाइबलमा घोडालाई जहिले पनि युद्धमा प्रयोग गरिने संकेतको रुपमा लिईएको छ। प्राचीन समयमा मानिसहरुलाई युद्धमा घोडालाई प्रयोग गर्दथे। युद्धमा घोडालाई प्रयोग गर्ने सर्न्दर्भमा यहाँ हितोपदेशका लेखकले तयारी पार्ने कुराको उल्लेख गरेका छन्। एउटा सिपाहीले आफ्नो घोडालाई सही किसिमले पालन पोषण गर्थे। सही किसिमले तालीम दिन्थे। किनकि उसले आफ्नो घोडालाई युद्धको निम्ति तयार गर्ने क्रममा यसरी घोडालाई तयारी गरिन्थ्यो। पुरानो करारमा हेर्दाखेरी घोडालाई रथ तान्ने अनि सिपाहीहरु चढेर युद्धमा निस्कन्थे। जस्तो प्रस्थान १४ अध्ययामा हेर्दा हामी पाउँछौं कि फारोको सेनाहरू इस्राएलीहरुमाथि हमला गर्न आउँदा रथ र घोढाचढीहरुद्धारा खेदिएको कुराको वर्णन गरिएको पाईन्छ। जब इस्राएलीहरुमाथि यस किसिमको विपत्ति ल्याउने प्रयत्न यी फारोको रथ र घोढाचढी सेनाहरुले प्रयत्न गरेका थिए तब परमेश्वरले तिनीहरुलाई लालसमुद्रमा डुबाएर नष्ट पार्नुभयो अनिर् इस्राएलीहरुलाई विजयी दिनुभयो। पुरानो करारमा घोडालाई युद्धको लागि अत्यधिक रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो। अहिले एक्काईशौ शताब्दीमा त घोडाचढी युद्धको खास अर्थ रहँदैन। अनि हाम्रो युद्ध फेरी मानिस मानिसबीचको युद्ध पनि होईन । घोडालाई तयार पारिन्छ भनिएको छ। एउटा राम्रो तरिकाले तयार पारिएको घोडा वलवान अनि चिल्ला मोटा हुन्छन्। दौडिनमा पनि अति शक्तिशाली हुन्छन्। यस्तै तरिकाले आज हामी विश्वासीजनहरु आत्मिक रुपमा वलवान भएर तयारी हुनु जरुरी छ। विना तयारी कुनै पनि कुरामा विजय हासिल गरिदैन अनि विना तयारी कुनै पनि कुरामा सफलता हात लाग्दैन।
“त्यहाँ घोडामा जुन कुरा वाहिररुपमा देखिन्छ त्यो कुरा मानिसको भित्री पट्टी हुनु एकदम असल हो।” -वेर्स्र्टन चर्चिलघोडा आफैमा मानिस भन्दा मुख्य कुरा त होईन यद्यपि मानिसले उसलाई एउटा हतियार अथवा प्रयोजनको रुपमा प्रयोग गरेको पाईन्छ। जसरी घोडालाई तयार पारिन्छ त्यसै गरी आज हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनमा आफैलाई तयार पार्नु पर्दछ। ताकि हामीले हाम्रो जीवनमा आईपर्ने युद्ध अनि संर्घषहरुमाथि विजय प्राप्त गर्न सकौं। यदि हामीले विजय प्राप्त गर्ने हो भने हामीलेपूर्ण रुपमा तयारी गर्नुपर्दछ। यदि हामीले सफलता प्राप्त गर्ने हो भने पूर्ण तयारी हुनु पर्दछ। विजय र सफलता प्राप्त गर्ने हो भने समान्य तयारीले मात्र पुग्दैन अनि यसको निम्ति पुर्ण तयारीकै जरुरी हुन्छ। बचन अध्ययन, प्रार्थना अनि परमेश्वरमाथिको भरोसामा परिपक्वता भएर हरेक समय तयारी हुनु एउटा विश्वासीको कर्तव्य हो।
विजयचाहिं परमप्रभुको हातमा हुन्छ
आज मानिसहरु कतिचोटी विभिन्न कुराहरुमा भर पर्दछन्। हामीले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिं के हो भने विजयचाहिं केवल परमेश्वरबाट आउँदछ। कति मानिसहरु रथहरु घोडाचढीहरुमा भरोसा राख्दछन् तर परमेश्वरमा भरोसा राख्नेले नै जीवनमा विजय र सफलता हासिल गर्दछ। शायद हामी कतिचोटी हामीसँग भएका शक्ति, धन सम्पत्ति, योग्यता अनि बलहरुमा घमण्ड गर्दर्र्छौ। तर हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने यी सबै कुरा भएर हामी जीवनमा सफलता र विजय पाउन सक्दैनौं। हाम्रो आईपर्ने अनेक प्रकारका युद्ध अनि संर्घष्ाहरुको लागि केवल परमेश्वरमा हाम्रो निम्ति विजय अनि सफलता रहेको छ। म यस्तो प्रकारको मान्छे हो भनेर आफुले घमण्ड गर्नुभन्दा परमेश्वरमा भरोसा राखेर जिउनु हामी विश्वासीहरुको लागि अति महत्वपर्ण कुरा हो।
हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ अनि उहाँमा भरोसा राख्न सिक्नुपर्दछ। उहाँको शक्तिशाली वाहुलीमुनि आफुलाई राख्‌नु पर्दछ। कतिचोटी हामीले आफ्नो तागत अनि बलमा भर पर्दछौं। कतिचोटी हामी आफ्नो धनसम्पत्ति अनि योग्यताका कारण घमण्ड गर्दछौं। परमेश्वरले उहाँको आत्माको शक्तिद्धारा हामीलाई विजय प्राप्त गर्न सहयता गर्नुहुन्छ। धेरैजना विश्वासीहरु संसारिक र शरारिक शक्तिद्धारा जोडतोडका साथ काम गर्दछन् र यस्तो प्रकारले आत्मिक युद्ध जित्नु असम्भव कुरा हो। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई काम गर्ने मौका दिनु पर्छ ताकि विजयचाहिं परमेश्वरको हातमा छ भनेर भनिएको छ। हामी परमेश्वरमा रहनु अति महत्वपूर्ण कुरा हो।
सोलेमान राजा जसले यो हितोपदेशको पुस्तक लेखे। उनलाई जीवनमा के कुराको कमी थियो र- उनी राजा थिए। उनी बुद्धिमानी थिए। उनी संसारकै धनी राजाको रुपमा रहेका थिए। उनका सेना घोडा अनेकन हात हतियारहरु थिए नै। जीवनको अन्त्यमा सोलोमन राजाले यही कुराको सत्य र यथार्थ प्रकट गरेका छन् यी सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि मानिसको जीवनमा सफलता र विजय प्राप्त गर्नलाई परमेश्वरको सहायता चाहिन्छ।
हाम्रो नजरमा हामी कस्ता छौं भन्ने कुरा होईन तर हामी परमेश्वरको नजरमा कस्ता छौं भन्ने कुराचाहिं अति महत्वपुर्ण हो। परमेश्वरलाई जित्न सक्ने कुनै व्यक्ति वा झुण्ड अनि सेनाहरु यो संसारमा छैनन। यस अर्थमा यस संसारको मानिसले घमण्ड गर्नु हुदैन। यहाँ यर्मिया अगमवक्ताले यसो भनेका छन्। “परमप्रभु यसो भन्नुहन्छ। बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस अथवा धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्।” यर्मिया ९:२३। हामीले घमण्ड गर्नु हो भने परमप्रभुमा घमण्ड गर्नुपर्दछ। म उहाँलाई चिन्दछु जान्दछु भनेर हामी घमण्ड गर्नुपर्दछ। किनकि विजयचाहिं परमप्रभुको हातमा छ।
दाउद राजा भन्छन्, “कोही रथहरुमा र कोही घोडाचढीहरुमाथि भरोसा गर्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गर्दछौं।” भजनसंग्रह २०:७। आज तपाइँ कोमाथि भरपर्नु भएको छ? आज तपाइँ के कुरामा असफल अनि हार खाईरहनु भएको छ? जीवनमा आईरहने युद्ध अनि संर्घष जसले तपाइँको मन अमिलो बनाईरहेको छ कि? तपाइँको जीवनको यी कुरा परमेश्वरमा राख्नुहोस र उहाँमा भरोसा गनुहोस्। परमेश्वरको विजय र सफलता तपाइँको जीवनमा आओस्। परमेश्वरले आशिष दिऊन्। रेशम कुमार सुनुवार Views: 157
Tags: sermons Like4members like this
Comment by Resham Kumar sunuwar on August 3, 2013 at 9:24pm amen hai amen Aruanaji Comment by aruna chhantyal on August 3, 2013 at 11:02am “कोही रथहरुमा र
कोही घोडाचढीहरुमाथि भरोसा गर्छन्, तर
हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै
नाउँमा भरोसा गर्दछौं।” भजनसंग्रह २०:७। Comment by Resham Kumar sunuwar on August 1, 2013 at 7:27pm you are most welcome Shrawan bomjan ji Comment by Shrawan Bomjan on August 1, 2013 at 5:49pm “कोही रथहरुमा र कोही घोडाचढीहरुमाथि भरोसा गर्छन्, तर हामी त परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरकै नाउँमा भरोसा गर्दछौं।” भजनसंग्रह २०:७। - बास्तवमा विजय प्रबुबाट नै आउछ । आज परमेश्वरबाट हामि प्रत्यक आत्मिकी युध्दमा विजय हासिल गर्न सक्छौ । दाउद राजालाई त भौतिक शक्तिहरु बीच पनि प्रभुले विजय दिनुभएको थियो । त्यहि परमेश्वर आज हामी संग हुनुहुन्छ , प्रभुले हामीलाई सबै परिस्थिति पार गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ । यदि हामि उहाँमा भर पर्छौ र हाम्रो जीवनको आधार उहाँलाई ठान्छौ भने । साँची नै प्रभुबाटको विजयलाइ जान्ने माउक याद लेखबाट पाए - धेरै धेरै धन्यवाद दाजु । प्रभुले हजुरलाई प्रसस्त आशिष दिनुभएको होस् । RSS